राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको बरण्डामा ग्यास सिलिण्डर पल्टी गरिँदै / अप्रिय घटना घटेको भए जिम्मेवारी लिने को ? (भिडियोसहित) | Hakahaki
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको बरण्डामा ग्यास सिलिण्डर पल्टी गरिँदै / अप्रिय घटना घटेको भए जिम्मेवारी लिने को ? (भिडियोसहित)
हाकाहाकी सम्वाददाता ।
२५ माघ, काटमाडौं ।
बैंकमा के के कारोबार हुन्छ ? तपाईंको उत्तर बैंकमा नगद यस्तै-यस्तै अन्य पनि कारोबार हुन्छ भन्ने हुनसक्छ । यो तपाईंको जवाफ सही हो । तर, त्यो बाहेक अरु यस्तो पनि हुँदोरहेछ ! जुन कुरा तपाईंलाई थाहा छैन, त्यो आज हामी भण्डाफोर गर्दैछौं । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको बरण्डामा ग्यास पल्टी हुन्छ ? हाकाहाकी डट कमले त्यो सम्भव भएको दृष्य कैद गरेको छ ।
घटना २०७२ माघ २४ गते आइतबार दिउँसो करिब २ बजेको हो । यो पंक्तिकार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपालको दोस्रो पुरानो र सबैभन्दा ठूलो बैंक “राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक”मा कर्जा सम्बन्धी समस्या लिएर सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको डिजिएम सुशील श्रेष्ठलाई भेट्न उनको कार्यकक्ष जाँदै गर्दा श्रेष्ठको कार्यकक्ष रहेको तलामा पुग्ने बेला सिंढी चढ्दै गर्दा बैंकको बरण्डामा जे देख्यो, त्यही दृष्य मोवाइलको क्यामेरामा कैद ग¥यो । जहाँ बैंकका तीन जना कर्मचारी मिलेर ग्यासको सिलिण्डर पल्टी गर्दै थियो । केन्द्रीय बैंकमा यसरी ग्यास पल्टी गर्दा कुनै अप्रिय घटना घटेको भए यसको जिम्मेवारी कसले लिने थियो ? प्रश्न गम्भीर छ । दोषीमाथि कुनै कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? ग्यासको सिलिण्डर पल्टी कसको आदेश र निर्देशनमा भएको हो ? कहाँ र कसको प्रयोजनको लागि यसरी गम्भीर गल्ती गरियो ? यसको जवाफ दिने निकाय कुन हो ?
लौ हेर्नुस् ! सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको बरण्डामा ग्यासको सिलिण्डर पल्टी गरिँदै गरेको भिडियो । भिडियो हेर्न Top मा रहेको Youtube or Google or Facebook link मा Click गर्नुहोस् । अथवा, https://www.youtube.com/watch?v=n29BbhE997I मा Click गर्नुहोस् ।